Dawladda Turkiga oo dalkeeda ka caydhisey safiirkii Israel u fadhiyay Ankara | Qaran News
Dawladda Turkiga oo dalkeeda ka caydhisey safiirkii Israel u fadhiyay Ankara
Writen by Qaran News | 3:31 am 16th May, 2018
Wasiirka arrimaha dibedda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa shaaca ka qaaday in ay dalka ka eryeen safiirkii Israel u fadhiyay magaalada Ankara Eitan Na’eh sababo la xidhiidha gabood-fallada dawladdiisa Israel ay maalmihii u dambeeyay ka geysatay marinka Qaza.
Safiirka ayaanan loo cayimin mudada uu dalka ka maqnaanayo, balse waxa loo sheegay oo kaliya in uu dalka isaga baxo.
Dhimashadii ugu badnayd ayaa Qasa ka dhacday tan iyo dagaalkii 2014kii, masuuliyiinta Falastiinna waxay sheegeen in ciidammada Israa’iil ay dileen 55 ruux ayna dhaawaceen 2,700 oo kale.
Ra’iisul-wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in milatarigiisu ay iska difaacayeen Xamaas oo jihaad doon ah oo uu ku sheegay in ay doonayaan in ay burburiyaan Israa’iil.
Hogaamiyaha Falastiin ayaa cambaareeyay kuna tilmaamay “xasuuq”. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay “in uu dhacay xadgud laga cadhoodo oo xuquuqda aadanaha ka dhan ah”.
Falastiiniyiinta ayaa muddo todobaadyo ah dibad baxayay hasayeeshee dhimashada ayaa sare u kacday maalinta uu Mareykanka safaaradda ka furtay magaalada Qudus oo ku beegneyd shalay.
Arrintan ayaa kusoo beegmeysa xilli dowladda Turkigu ay ku amartay safiirradeeda kala fadhiya magaalooyinka Telaviv iyo Washington sababo la xidhiidha xiisadda ka taagan marinta Qaza ee ay ku dhinteen labo maalmood gudeheed 55 ruux, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 2500 oo falastiiniyiin ah.
Sidoo kale dowladda Konfur Afrika ayaa u yeedhay safiirkeeda dalka Israel Sisa Ngombane kaas oo maalinimadii Isniinta ka tagay Israel. Xidhiidhka Koonfur Afrika iyo Israel ayaa in muddo ahba xumaa, waxaana ay dowladda Koonfur Afrika taageertaa halganka falastiiniyiinta.